Robert Louis Stevenson anozvarwa. Nhetembo nhatu dzakasarudzwa | Zvazvino Zvinyorwa
Robert Louis Stevenson Ini ndakazvarwa pazuva rakaita nhasi kubva 1850 en Edinburgh. Zvanga zviri munyori, munyori wenyaya uye mudetembi, uye mamwe emabasa ave zvekare zvinyorwa kwete chete mwana nehudiki, asi kweese mazera. Munyori wezvese zvepasirose mazita akadai se Treasure Island, Iyo Nhema Museve, Ishe weBallantree o Dr. Jeckyll naVa Hyde, akararama zvechokwadi hupenyu hwakafanana. Nhasi, zvakadaro, ndinoda kumurangarira mune rake isingazivikanwe nhetembo ine nhetembo ina akasarudzwa pabasa rake.
2.1 Rimwe zuva tinodanana
2.2 Muviri wangu igomba rangu
2.3 Pasina tsitsi tinopinda usiku
Mwanakomana weinjiniya, akadzidzawo basa iri uye Mutemo gare gare muElinburgh. Asi yaive yagara ichinzwa kukwezvwa nemabhuku uye akafunga kuzvipira kwairi. Akazviita zvakanaka zvekuti mumakore mashoma akazove mumwe wevanyori vakanyanya kukosha venguva yake.
Kuzivikanwa kwake kwaive kwakavakirwa zvakanyanya pazvirongwa zvinonakidza zveyekufungidzira uye enganonyorwa yenhau. Asi aidzidzirawo nhetembo yevana (Bindu remavhesi evana) uye vakuru. Idzi ndidzo nhetembo ina dzakasarudzwa kubva mubhuku rake rerwiyo.
Iwe unonyatsoda here kufarira swing
uye kukwira, kuburuka ...?
Icho ndechimwe chezvinhu zvinonakidza kwazvo
izvo zvinogona kuitwa nemwana!
Kuzvipa simba rangu ndinotonga gadheni
uye ndinoona ipapo nechekure
nzizi nemakomo, mombe uye, pakupedzisira,
chii chiripo kumataundi iwayo.
Ini ndinoenda pasi mushure uye kana ini ndichienda pasi ini ndinogona kuona
Ndinoenda kuburikidza nemhepo, ndinozvisundidzira zvakare
Uye ini ndinokwira, uye ndinodzika, uye ndinobhururuka!
Rimwe zuva tinodanana
Pakati pegwenzi remabriji uye zvitsuwa zvetsanga, sepasirese nyika raingova denga, haiwa nzvimbo yakachinjika, chikepe cherudo rwedu chakakwenya. Kupenya semasikati meso ako, kupenya kwerukova kuyerera uye iro rakakura uye risingaperi denga raipenya.
Kana kubwinya kukafa murima regoridhe, kupenya kwemwedzi kwakakwira, uye kuzere nemaruva kumba takadzokera. Radiant anga ari maziso ako husiku ihwohwo, isu tanga tagara, oh my love, isu tanga takuda.
Iye zvino chando chinoputira rwizi rwedu, nekuchena kwaro chando chinofukidza chitsuwa chedu, uye padyo nemoto wechando Joan naDarby doze nekurota. Nekudaro, pakurota, rwizi rwunoyerera uye chikepe cherudo chichiri kutsvedza.
Teerera kurira kwengarava ichicheka mvura dzayo. Uye pamasikati echando masikati apo fungidziro dzinorota mukutsemuka kwenzvimbo yemoto, munzeve dzevadikani vekare rwizi rwerudo rwavo rwunoimba mumatsanga.
Haa mudiwa wangu, ngatidei zvakapfuura nekuti rimwe zuva taifara, uye rimwe zuva tinodanana.
Muviri wangu igomba rangu
Muviri wangu, unova mutorongo wangu,
ndiwo mapaki angu nedzimba dzangu dzoushe.
Iwo makuru zvekuti ini ndinogara ndiripo,
zuva rese, kubva kune rimwe divi kuenda kune rimwe, zvishoma nezvishoma;
uye apo husiku hunotanga kudonha
pamubhedha wangu, ndakarara,
apo chivakwa chose chinopenga mukumuka kwayo,
kunge mwana wemusango,
panguva yorubvunzavaeni, achamunyengera abve panzira yake;
(uchidzungaira, rimwe zuva rezhizha
nemateru egomo, ndokukwira)
achakarara mugomo rake;
Akareba, akareba, akakwana,
kuti uko, muminda yekusingaperi yemhepo,
kufunga kwangu kunokwira sekiti.
Pasina tsitsi tinopinda usiku
kusiya mabiko ane ruzha, kusiya kana uchienda
kudengenyeka mukurangarira kwevanhu,
chakareruka, chinotapira, chisina kusimba senge mimhanzi.
Zvimiro zvechiso, matauriro ezwi,
kubatwa kweanodiwa ruoko, zvese, imwe mushure meimwe,
achaparara agoparara panyika.
apo, muhoro, vanhu vazhinji vanofarira muturikiri mutsva.
Asi mumwe munhu anogona kutora nguva yakati rebei kuti aende
uye, uchinyemwerera, mumoyo mako wekare rangarira
kune avo vakakanganwa kwenguva refu.
Uye mangwana, naiyewo, achaenda kune rimwe divi reketeni.
Uye saka nguva, inova nyowani kune vamwe, inotikanganwa uye inoenderera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Robert Louis Stevenson anozvarwa. 4 nhetembo dzakasarudzwa
Vanozviburitsa vanyori, mhando kana ngano?